I-Hydralazine HCL (304-20-1): Umsebenzi kunye nesisombululo kunye nemiphumo emibi
/Blog/Hydralazine HCL/I-Hydralazine HCL (304-20-1): Umsebenzi kunye nesisombululo kunye nemiphumo emibi
ezaposwa ngomhla 06 / 24 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Hydralazine HCL.
Yonke into malunga ne-Entecavir hydrate powder
Inkqubo yezenzo ze-2.Hydralazine HCL
3. Indlela yokusebenzisa i-Hydralazine HCL?
I-4. Ndingayifumana njani i-hydralazine HCL (Apresoline)?
5. Hydralazine HCL Isisombululo
7. Iimpembelelo zeHydralazine HCL
8.Ukugcina i-hydralazine? HCL (304-20-1)?
Hydralazine hydrochloride powder ividiyo
IHydralazine HCL powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: Hydralazine hydrochloride powder
I-molecular Formula: C8H9ClN4
Isisindo somzimba: 196.64
I-Hydralazine HCL isetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo lwegazi oluphezulu (uxinzelelo lwegazi). Isetyenziselwa ukulawula uxinzelelo lwegazi oluphezulu kumama ngexesha lokukhulelwa (pre-eclampsia okanye eclampsia) okanye kwiimeko ezingxamisekileyo xa uxinzelelo lwegazi luphezulu kakhulu (ingxaki enkulu).
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu luyongeza kumthwalo wokusebenza kwentliziyo kunye nemithambo. Ukuba iqhubeka ixesha elide, intliziyo kunye nemithambo yegazi ayinakusebenza kakuhle. Oku kungonakalisa imithana yegazi yengqondo, intliziyo, kunye neentso, okubangelwa ukubetha, ukuhluleka kwentliziyo, okanye ukungaphumeleli kwezintso. Ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kunokunyusa umngcipheko wokuhlaselwa kwentliziyo kunye nemivimbo.
I-Hydralazine HCL isebenza ngokuphucula imithana yegazi kunye nokwandisa ukunikezelwa kwegazi kunye ne-oksijini entliziyweni ngelixa kuncitshiswe umthwalo walo msebenzi. Le nyeza ifumaneka kuphela ngogqirha wakho.
2. Indlela yokusebenza ye-Hydralazine HCL
I-Hydralazine HCL (i-304-20-1) yi-vasodilator yembambano; kubangela ukuphumla kwe-arteriolar muscle ephosakeleyo ngefuthe ngqo. Nangona ukuvuselelwa kwenkqubo yokutya yeentlanzi kuhambelana nolawulo lwe-hydralazine HCL, le yimpendulo yempesheni kwaye ayiyiyo inxalenye yendlela yayo. Inkcazelo yeemodeli ye-hydralazine HCL yindlela engacaciswanga ngokupheleleyo; nangona kunjalo, efana ne-nitrate ye-nitrate kunye ne-nitroprusside, kucingelwa ukuba i-hydralazine HCL iphazamisa ukunyakaza kwe-calcium ngaphakathi kwe-muscular smooth muscle ejongene nokuqalisa nokugcina imeko enesivumelwano. Ngokungafani ne-nitrate ephilayo kunye ne-nitroprusside ye-sodium, nangona kunjalo, i-hydralazine HCL ikhetha i-arterioles.
Iziphumo ze-vasodilating ze-hydralazine HCL kwiziphumo zokunciphisa uxinzelelo lwegazi (i-diastolic ngaphezu kwe-systolic) kunye ne-peripheral resistance to vascular. Ukongezelela, i-hydralazine i-HCL-induced reflex autonomic response yandisa izinga lentliziyo, umthamo we-stroke, i-heart output, kunye neqhekeza le-ventricular ejection. Ukuhluthwa okukhethiweyo kwe-arterioles, xa kuthelekiswa nemifuno, kunciphisa i-postural hydralazine i-HCL kwaye kukhuthaza ukwanda kwenkqubela yomzimba nangona i-hydralazine HCL I-hydralazine HCL yanciphisa ngokuthe ngenyuka kwiphumo lenhliziyo. Kukho ubungqina bokuthi i-hydralazine HCL inesiphumo esihle se-inotropic kwi-ventricle engaphumeleliyo.
Iinkcukacha zezilwanyana kunye nolinganiselwe zibonisa ukuba i-nitric oxide (NO) inokuveliswa kwi-hydralazine HCL ene-quality antioxidant ekuphuculeni imiphumo ye-nitrate kunye nokunciphisa ukunyamezela okunxulumene neyeza ezithatha i-nitrate. Impembelelo ye-antioxidant ye-hydralazine HCL inokubakho ngenxa yokukwazi ukuvimbela i-oxyidase. Ukuqokelela kwe-radicals yama-free oxidative kwakha indawo apho ukunciphisa okungapheliyo ku-NO biovailability kukhokelela ekulahlekeni kwe-skeletal muscle microvessels. Esi siphumo, ekuhambeni kwayo, sikhokelela ekungcoliseni umfutho we-muscle ngokungafuneki. Uphando lubonisa ukuba unyango nge-hydralazine HCL luvimbela ngokukodwa i-oxidase edlala indima ekulawuleni i-bioactivity ye-NO, eveliswe ngokugqibeleleyo okanye xa ilawulwa ngokugqithiseleyo.
I-cerebral, i-coronary, splanchnic, kunye negazi le-renal flow flow often increasing after the management of hydralazine HCL, ngelixa iiparitha ze-urinary zingabonakali. I-hydralazine i-HCL kwandisa umsebenzi we-plasma kwi-plasma, mhlawumbi iiseli ze-juxtaglomerular ze-renal ekuphenduleni i-system ye-nervous system stimulation; ukwandiswa kwemisebenzi yomsebenzi kubangela ukuveliswa kwe-angiotensin II, evuselela i-aldosterone kwaye ngoko, ukubuyiswa kwe-sodium. Ngenxa yokugcinwa kwamanzi, i-plasma volume increases. Ngenxa yoko, ukunyamezela kungahlakulela, oku kungabangela ukungabikho kokuphucula kwezinye izigulane ezifumana iziyobisi ixesha elide.
Njenge-antihypertensive, i-hydralazine HCL ayikhokeli ekuphuculeni kwi-LVH. I-hydralazine i-HCL inokwenzakalisa ngakumbi i-LVH, enokubangelwa yi-tachycardia yokuchukumisa kunye nokuvuselela okuvelisayo, okungaxhathisa inzuzo yokunciphisa emva kokulandelwa.
Thatha la mayeza ngomlomo kunye okanye ngaphandle kokutya, ngokuqhelekileyo i-2 kumaxesha e-4 imihla ngemihla okanye njengoko ugqirha ugqirha wakho. Umyinge usekelwe kwimeko yakho yonyango kunye nempendulo kunyango. Ugqirha wakho angakuqala kwisebe eliphantsi kwaye ngokunyuka ukwandise umthamo wakho. Landela imiyalelo yakho ugqirha.
Sebenzisa le mayeza rhoqo ukuze ufumane inzuzo enkulu kuyo. Ukukunceda ukhumbule, yithatha ngamaxesha afanayo ngosuku ngalunye. Kubalulekile ukuqhubeka nokuthatha le mayeza nangona uvakalelwa kakuhle. Uninzi lwabantu abanexinzelelo oluphezulu lwegazi abazizwa begula. Kungathatha iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba uzuze ngokupheleleyo le nkunkuma.
Ungayeki ukuthatha le myeza ngaphandle kokubonisana nodokotela wakho. Ezinye iimeko ziya kuba zibi xa eso sigqirha sakha ngokukhawuleza. I dose yakho ingadinga ukuba iyancipha kancane kancane.
4. Ndingayithatha njani i-hydralazine HCL (Apresoline)?
Thatha la mayeza ngokuchanekileyo njengoko ugqirha ugqirha wakho. Musa ukuyithatha kwixabiso elikhulu okanye ixesha elide kunconywayo. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho yemithi.
Ukuze uqiniseke ukuba le nyilisi inceda imeko yakho kwaye ingabangela iziphumo eziyingozi, uxinzelelo lwegazi luya kufuna ukuba luhlolwe rhoqo. Unokufuna kwakhona iimvavanyo zegazi. Ungaphuthelwa nayiphi na imivuzo ehleliweyo.
Gcina usebenzisa i-hydralazine HCL njengoko iyalathwayo, nokuba uziva kakuhle. Uxinzelelo lwegazi oluphezulu kaninzi alukho iimpawu, ngoko awukwazi ukuba xa uxinzelelo lwegazi luphezulu. Unokudinga ukusebenzisa imishanguzo yegazi ngenxa yobomi bakho bonke. Gcina i-hydralazine HCL ekamelweni lokushisa ngaphandle kwomswakama nobushushu.
(1) Kwenzeka ntoni ukuba ndilahlekelwa umthamo (Apresoline)?
Thatha umthamo olahlekileyo ngokukhawuleza ukuba ukhumbule. Ukuba liphantse ixesha elizayo leli dose, linda kude kube ngoko uthabathe iyeza kwaye unqumle umthamo olahlekileyo. Musa ukuthatha unyango olongezelelweyo ukwenza i dose ephosakeleyo.
(2) Yintoni eyenzekayo xa ndidlula i-Apresoline?
Funa ingqalelo yonyango ngokukhawuleza ukuba ucinga ukuba uye wasebenzisa oluninzi la mayeza.
Iimpawu zokugqithisa zibandakanya intloko, isisu, isantya senhliziyo, ukufudumala okanye ukubetha phantsi kwesikhumba sakho, intlungu yesifuba okanye ukuphelelwa amandla.
(3) Yintoni okufanele ndiyiphephe xa ithatha i-hydralazine HCL (Apresoline)?
Gwema ukukhawuleza ngokukhawuleza ukusuka kwindawo ehleliyo okanye ekuxoxeni, okanye uziva unesidima. Vuka ngokukhawuleza kwaye uzinze ukuze ukhusele ukuwa.
I-300 mg / usuku lwe-PO yengozi yomshurensi. Izilingo eziphezulu zisetyenziselwe ukuphatha izigulane ezinokukhubazeka kwentliziyo; nangona kunjalo, amanani angaphezu kwe-200-300 mg / usuku lwe-PO adibene nomngcipheko ophezulu we-systemic lupus erythematosus. I-Titrate IV kunye nemilinganiselo ye-IM njengoko kuyimfuneko yokulawula uxinzelelo lwegazi.
Ukhuseleko kunye nokusebenza akuzange kusekwe; nangona kunjalo, i-7.5 mg / kg / day PO okanye i-200 mg / usuku lwe-PO, nokuba ngaphantsi ngaphantsi, okanye i-3.5 mg / kg / day IV okanye i-IM isetyenzisiwe.
Ukhuseleko kunye nokusebenza akuzange kusekwe; Noko ke, i-7.5 mg / kg / day PO okanye i-3.5 mg / kg / imini IV okanye i-IM isetyenzisiwe.
Ukhuseleko kunye nokusebenza akuzange kusekwe; nangona kunjalo, i-7.5 mg / kg / day PO okanye i-0.6 mg / kg / umthamo IV sele isetyenzisiwe.
Qhubeka usebenzisa i-hydralazine njengoko iyalathwayo, nokuba uziva kakuhle. Uxinzelelo lwegazi oluphezulu kaninzi alukho iimpawu, ngoko awukwazi ukuba xa uxinzelelo lwegazi luphezulu. Unokudinga ukusebenzisa imishanguzo yegazi ngenxa yobomi bakho bonke.
Gcina i-hydralazine kwiqondo lokushisa lokusuka ngaphandle kobushushu nokushisa. Funa ingqalelo yonyango ngokukhawuleza ukuba ucinga ukuba uye wasebenzisa oluninzi la mayeza. Iimpawu zokugqithisa zibandakanya intloko, isisu, isantya senhliziyo, ukufudumala okanye ukubetha phantsi kwesikhumba sakho, intlungu yesifuba okanye ukuphelelwa amandla.
(1) Ziziphi iindlela zokusebenzisa i-hydralazine-ngomlomo?
I-Hydralazine-ngomlomo isetyenziselwa unyango lwexinzelelo olubalulekileyo (uxinzelelo lwegazi oluphezulu), lodwa okanye luhlangene namanye amayeza anxamnye ne-hypertensive. Kwakhona kusetyenziselwa ukunyangwa kweengxaki ezixinzelelekileyo kunye nokuhluleka kwentliziyo.
Tshela ugqirha wakho ukuba imeko yakho ibuhlungu (umzekelo, ukunyuswa kwengcinezelo yegazi rhoqo).
(2) Iyiphi imilinganiselo ye-hydralazine-ngomlomo?
Uxinzelelo lwengqondo kwizigulane zabantu abadala:
♦ Qala unyango kwiqondo eliphantsi kwaye ukwandise kancane ngokusekelwe kwisigulana ngasinye somguli. Isiqhelo esiqhelekileyo sokuqalisa i-regimen ngu-10 mg ngomlomo kane rhoqo imihla ngemihla kwi-2 yokuqala kwiintsuku ze-4, ukwandisa ukuya kwi-25 mg kane ngeentsuku zeentsuku ze-iveki yokuqala.
♦ Kwiiveki zesibini kunye nezilandelayo, ukwandisa umlinganiselo kwi-50 mg kane rhoqo imihla ngemihla (ukwandisa umthamo nge-10-25 mg / umthamo ngokuthe rhoqo kwiintsuku ze-2-5).
♦ Umlinganiselo osetyenziswayo wemihla ngemihla osetyenziswa kwizifundo zonyango ngu-300 mg.
♦ Umlinganiselo wokuqala wokunyanga ukukhubazeka kwentliziyo yi-10 ku-25 mg ngomlomo 3 kumaxesha e-4 imihla ngemihla.
♦ Isiqhelo esiqhelekileyo si-225 ukuya kwi-300 mg imihla ngemihla kwi-3 ukuya kwi-4 iisadi ezihlukeneyo.
♦ Ukuphuthuma kwezilwanyana zengxakeko zegazi, i-dose yi-0.5 mg / Kg IV nganye iiyure ze-4.
(3) Ngaba i-hydralazine-ngomlomo ukhuselekile ukuba ithathe ukuba ndikhulelwe okanye ndincelise?
Hydralazine-ngomlomo kufuneka isetyenziswe ekukhuleleni kuphela ukuba inzuzo enokuthi ifaneleke ingozi ebantwini. I-Hydralazine-ngomlomo ichazwa njenge-FDA inqanaba lokukhulelwa komngcipheko C (iziphumo zokuzaliswa kwezilwanyana ziye zabonisa impembelelo embi kwi-fetus kwaye akukho zifundo ezaneleyo nezilawulwa kakuhle kubantu, kodwa iingeniso ezinokuthi zivumeleke ukusetyenziswa kwezidakamizwa kubafazi abakhulelweyo nakuba ingozi). Isetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi ngexesha lokukhulelwa.
I-Hydralazine-ngomlomo ikhutshwe ngobisi lwebele. I-Hydralazine-ngomlomo kufuneka isetyenziswe ngokucophelela kubafazi abancancisayo xa unyango luyimfuneko.
I-tablet ye-Hydralazine yomlomo ayibangeli ubuthongo, kodwa ingabangela ezinye iziphumo ezibi.
(1) Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ezinokuthi zenzeke nge-hydralazine ziquka:
· Ukulahlekelwa kwesidlo (anorexia)
· iintlungu zesifuba
Ukuba ezi ziphumo zincinci, zingaphuma iintsuku ezimbalwa okanye iiveki ezimbalwa. Ukuba banzima kakhulu okanye bangahambi, xela ugqirha wakho okanye umkhompiki.
(2) Imiphumo emibi kakhulu
Shayela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unemiphumo emibi. Shayela i-911 ukuba iimpawu zakho ziziva zisongela ubomi okanye ukuba ucinga ukuba unobungozi bonyango. Iziphumo ezibi kakhulu kunye neempawu zabo zingabandakanya oku kulandelayo:
♦ Izimpawu ezinxulumene nenhliziyo, ezifana:
Umxinzelelo ophantsi wegazi (hypotension)
Ubuxhakaxhaka okanye ukuphazamiseka
Ukukhupha kwizandla kunye nemilenze yakho
♦ iingxaki zemisipha. Iimpawu zingabandakanya:
· Ukunciphisa okanye ukutshaya kwesikhumba sakho
♦ Ukuxinezeleka okanye uxhalabisayo. Iimpawu zingabandakanya:
Uvakalelwa phantsi okanye ungathandi
Uvakalelwa ukhathazekile okanye uphawule
· Unomdla kwizinto oqhele ukuzenzayo
♦ Ingxaki yokuphendula. Iimpawu zingabandakanya:
Ubomvu kwesikhumba sakho
· Ubuhlungu kwiindawo zakho
· Ukuphefumla kwengxaki
· Ukuqhaqha okukhulu
· Ukuguquka kweengxaki
(3) Ngaba i-hydralazine HCL ingabangela iingxaki?
Kanye nemiphumo yabo efanelekileyo, amaninzi amayeza angabangela iziphumo ezingathandekiyo ngaphandle kwinto yokuba wonke umntu azifumana. Itafile engezantsi iqulethe ezinye zezona ziqhelekileyo ezidibeneyo Hydralazine HCL. Indawo efanelekileyo yokufumana uluhlu olupheleleyo lweempembelelo ezisecaleni ezinokudityaniswa neyeza lakho, livela kwiphepha leprinta eliprintiweyo linikezwa ngamayeza. Ngenye indlela, unokufumana umzekelo wenkcazelo yowomenzi kwiphepha elingenisiweyo apha ngezantsi. Thetha kunye nogqirha okanye ummakhompi ukuba kukho na oku kulandelayo kuqhubeka okanye kuba yingxaki.
Ngaba i-hydralazine HCL ingabangela iingxaki?
Iziphumo eziqhelekileyo ze-hydralazine (ezi zichaphazela ngaphezulu kwe-1 kubantu be-10) Yintoni endiyenzayo xa ndifumana oku?
intloko ebuhlungu Phuza amanzi amaninzi uze ubuze umfama wakho ukuba ancomele i-painkiller efanelekileyo. Ukuba intloko iyaqhubeka, thetha nodokotela wakho
Ukunyamekela kwentliziyo, ukuvakalelwa kwenhliziyo 'yentliziyo' (iipilpitations) Ukuba ukhathazekile, thetha nodokotela wakho
Iziphumo eziqhelekileyo ze-hydralazine (ezi zichaphazela ngaphantsi kwe-1 kubantu be-10) Yintoni endiyenzayo xa ndifumana oku?
Ukuziva utyumbile, ukuvuvukala kweenyawo okanye i-ankle, intlungu yesifuba Ukuba kukho enye yale mpawu iqhubeka okanye ikukhathaze, thetha nodokotela wakho
Uziva udizzy Ukuba oko kwenzeka, hlala phantsi ixesha elide uze uzive ungcono. Musa ukuqhuba kwaye ungasebenzisi izixhobo okanye uomatshini ngelixa uchaphazelekayo. Musa ukusela utywala
Ukuziva ugula okanye ugula (ukuhlanza), isifo sohudo Yidla ukutya okulula kwaye uphuze amaninzi amanzi ukuze ufake indawo yamanzi alahlekileyo
Intlungu ehlangeneyo okanye emisipha Thetha nogqirha wakho malunga nalo ngokukhawuleza. Kungaba ngumqondiso wokuqala we-systemic lupus erythematosus-like syndrome
Ukuba ufumana ezinye iimpawu ocinga ukuba zibangelwa yi-HLM ye-hydralazine, nceda uthetha nogqirha wakho okanye ukhemistri ukuze ufumane iingcebiso ezingaphezulu.
8. Indlela yokugcina i-hydralazine HCL (304-20-1)?
♦ Gcina onke amayeza avela emehlweni kwaye afinyelele kubantwana.
♦ Gcina kwindawo epholileyo, eyomileyo, kude nokushisa okuthe ngqo kunye nokukhanya.
tags: bathenge i-Hydralazine powder, Hydralazine HCL powder
I-Hydralazine HCL (304-20-1) isetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo lwegazi oluphezulu
Indlela yokuthenga i-Nifuratel Drug (4936-47-4) inyathelo ngeNyathelo kwi-Intanethi	I-Hydralazine HCL (304-20-1) isetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo lwegazi oluphezulu